Zimbabwe: 7 Detained After Rights Meeting - allAfrica.com
Johannesburg — Zimbabwe's authorities should immediately release seven activists and drop fabricated charges of seeking to subvert the government.
"Zimbabwe's government should stop criminalizing peaceful activism," said Dewa Mavhinga, southern Africa director at Human Rights Watch. "Participating in a training workshop on nonviolent action is not subverting the government."
Since the beginning of 2019, the government of President Emmerson Mnangagwa, which has promoted a "new dispensation" that respects basic rights, has arrested and prosecuted several peaceful activists on baseless charges.
"Zimbabwe authorities should immediately end the arbitrary arrests and prosecutions of activists who are exercising their basic rights and liberties," Mavhinga said. "Repressing peaceful activists severely undermines Zimbabwe's international reengagement efforts."